Wax Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Sirdoonka Farsamada Gacanta Iyo Saameynta Uu Ku Leeyahay PPC, U Dhaladka, Iyo Muuqaalka Xayeysiinta | Martech Zone
Sannadkan waxaan qabtay dhowr hawlood oo hami leh. Mid wuxuu ka mid ahaa horumarkayga xirfadeed, si aan u barto wax kasta oo aan ka ogaan karo sirdoonka macmalka ah (AI) iyo suuqgeynta, kan kalena wuxuu diiradda saarayay cilmi baarista farsamada xayeysiiska sanadlaha ah, oo la mid ah wixii halkaan lagu soo bandhigay sanadkii hore - the 2017 Native Technology Advertising Muuqaal.
Waqti yar ma aanan ogeyn, laakiin ebook dhan ayaa ka soo baxay cilmi-baaristii xigtay ee AI, "Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Falanqaynta Suuqgeynta iyo Sirdoonka Caqliga. ” Macno ahaan waa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato suuqgeynta iyo AI maanta iyo saameynta ay ku leedahay gorfaynta, kasbashada, milkiilaha iyo warbaahinta lacagta la siiyay. Natiijo ahaan, waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago waxa aan ku bartay sameynta dhammaan cilmi-baaristaan ​​dhow ee taxanaha laba qayb ah.
Qeybta koowaad waxay diiradda saari doontaa saameynta AI ee warbaahinta lacag bixinta si loogu daro PPC, bandhig iyo xayeysiinta udhaxeysa. Taasi waxay u rogi doontaa maqaal labaad oo si gaar ah diiradda u saaraya muuqaalka tikniyoolajiyadda xayeysiinta ee waddankan sannadkan. Waxaa ku kordhay 48% sanadkii hore.
Kahor intaanan bilaabin saameynta AI ee warbaahinta lacag bixinta waa inaan marka hore eegnaa saameynta ay ku leedahay falanqaynta. Taasi, laga yaabee, inay ka sarreyso wax kasta oo kale waxay leedahay saameynta tooska ah ee tooska ah ee warbaahinta lacag bixinta.
Sirdoonka Cilmiga ah iyo Falanqaynta
Inteena ugu badan ayaa loo bartay isticmaalidda mid ka mid ah saddexda ama baaxadaha waaweyn ee gorfaynta. Waxay ahaan doonaan magac la'aan. Nidaamyadani waxay sidoo kale leeyihiin qaar ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee xayeysiinta internetka ee adduunka. Iyagu ma leh dhiirigelin badan oo naga caawinaysa inaan wax yar kharash gareyno oo aan wax badan guuleysanno.
Natiija ahaan, waxay kaliya diirada saaraan xogta illaa hal shahaado ka fog boggaga internetka. Waa tan waxa u eg:
Inteena ugu badan waxaynu ku bar-baranay inay ku eegaan gorfayntayada qaabkan u gaar ah. Si kastaba ha noqotee, qaabkani wuxuu kaliya matalayaa illaa 20% xogta laga heli karo inta ku jirta qaybtayada saamaynta onlaynka ah. Haddii aan dooneyno inaan aragno 80% kale qaabku wuxuu u baahan doonaa inuu diirada saaro xogta seddex darajo ka fog websaydhadeena. Waa tan waxa u eg:
Adoo adeegsanaya AI si ay u soo jiidaan durdurro xog durugsan oo qaabaysan oo aan nidaamsanayn, gorfaynta ayaa runtii arki karta ku dhowaad 100% ka mid ah websaydhka mawduucyada saamaynta ee khadka tooska ah, furitaanka 80% ma arki karno iyadoo la adeegsanayo mid ka mid ah saddexda qaybood ee falanqaynta waaweyn. Waxay u dhigantaa fiirinta internetka sidan oo kale:
Marka laga soo horjeedo kaliya aragtidan ay saddexda waaweyn na siinayaan:
Lahaanshaha aragtidan ayaa saameyn aad u weyn ku leh kasbashada, milkiilaha iyo lacagta la bixiyo waxaanan ku baadhayaa mid kasta iyo qayb hoosaadyadooda buuggayga cusub. Si kastaba ha noqotee, qodobkaan aan hadda eegno saameynta uu ku leeyahay warbaahinta lacag bixinta gaar ahaan.
Sirdoonka Cilmiga ah iyo Xayeysiinta Muuqaalka
Weedhaha “programmatic” iyo “waqtiga-qandaraaska” (RTB) waxay ahaayeen guuxa dhawrkii sano ee la soo dhaafay ee muuqaalka iyo hareeraha, iyo guud ahaan warbaahinta lacagta la siinayo. Mararka qaarkood, weedhahan waxaa laga wada hadlaa AI, barashada mashiinka iyo ka shaqeynta luqadda dabiiciga ah. In kasta oo nidaamyada barnaamijyada iyo kuwa RTB labadaba ay leeyihiin waxyeello AI ah, waxay runti metelaan tikniyoolajiyad buundo ah oo dhaqaajinaysa xayeysiinta ka socota heerka ay hadda ku sugan tahay ee dhexdhexaadnimada-hufnaanta, mustaqbal dhammaystiran loo aaneynayo oo hufan
Laba teknolojiyad ayaa saameyn weyn ku yeelan doona kala-guurkan - AI iyo xannibaadda. Goobta bandhiggu waxay la halgameysaa daahfurnaan iyo sifo labadaba. Waxaa jira dhinacyo badan oo saddexaad oo halkaas jooga oo gacmahooda ku dhajiya madaclada nacnaca isla markaana soo qabta dinaar xilli miisaaniyadeena qaaliga ahi ku baxday. Ku dar intaas oo ah cunnooyin spam spam ah oo sameeya gujis-khiyaano oo aad leedahay nidaam ay ku badan yihiin dhibaatooyinka.
Celcelis ahaan, xayeysiinta bandhigga ayaa leh a heerka-riix-marayo 0.05%. Kuwaas gujinaya kaliya 30 ilaa 40% kamida ayaan isla markiiba kabixin. Karti la'aanta kanaalkan ayaa ah wax lala yaabo. Xayeysiiskii ugu horreeyay ee lagu soo bandhigo wuxuu ka yimid AT & T dib 1994 wuxuuna soo bandhigay 44% heerka guji-dhex-marin. Sanadkii 1998 sicirka gujinta ayaa si aad ah hoos ugu dhacay - dhow waxa aan maanta aragno.
Warka wanaagsani waa in tikniyoolajiyaddu ay gacan ka geysaneyso in dhibaatooyinkaas lagu xaliyo waxqabad la'aan. Deegaanka falanqaynta AI-wadista ee ku faaneysa seddex darajo oo ah astaamo ka fog websaydhka, magacyadu ma awoodi doonaan oo keliya inay arkaan kanaalada bandhigga ugu hufan ee ku kaxeeya taraafikada iyaga, laakiin dhammaan kanaallada si karti leh ugu kaxeeya taraafikada dhammaan websaydhka taxaddar leh. gudaha iyo agagaarkooda.
Iyada oo loo marayo falanqaynta ay waddo AI, magacyadu waxay si sax ah u ogaan doonaan meesha ay u baahan yihiin inay laba jibbaaraan iyo halka ay uga baahan yihiin inay miisaaniyadda kala jiidaan. Heerkan aragtida ahi wuxuu caawinayaa laba-jibbaar, iyo xitaa seddex-jibbaar heerarka riix-dhex-dhexaad ah iyo waxqabadka guud ee dhajinta kadib-gujinta ee loogu talagalay xayeysiinta.
Sirdoonka Cilmiga ah iyo Bixi Halkii Guji
Xalalka falanqaynta AI-wadista waxay dusha sare ka saari karaan jumladaha ereyada muhiimka ah ee ugu saameynta badan sumadda iyadoo la adeegsanayo ilo badan oo xog aan nidaamsaneyn. PPC kaliya maahan xayeysiinta Google. Waxay tilmaamaysaa dulduleelada waxayna qeexaysaa ereyada muhiimka ah ee cusub, hagaajinta dalabyada iyo kooxaha xayeysiinta. Waxay ka caawisaa suuqleyda inay si hufan u maareeyaan miisaaniyadooda.
Isku-darka suurtagalka ah ee jumladaha ereyada muhiimka ah, kooxaha xayeysiinta, bartilmaameedka, iwm. Oggolaanshaha xogtan weyn in lagu falanqeeyo iyadoo la adeegsanayo falanqaynta AI-wadista ayaa ah habka ugu wax ku oolka badan ee lagu hubiyo in summad ay maalgashi ku sameyneyso isku dhafka ugu wanaagsan ee suurtagalka ah iyo burburka.
Isticmaalka barashada mashiinka waxay ku fiicnaaneysaa kaliya waqtiga. Waxay si joogto ah u wanaajinaysaa si loo wado dakhliga ama ujeedooyinka loo aasaasay PPC. Iyada oo ay tahay dabeecaddeeda-waqtiga dhabta ah, falanqaynta AI-ku-kicinta ee loo isticmaalo awoodda koontada maareynta, ayaa si gaar ah muhiim ugu ah noocyada xasaasiga u ah xilli-dhaqmeedka dhaqso u dhaqaaqa, suuqyada ama macaamiisha.
In kasta oo AI ay samaysay waddooyin badan oo dhammaad ah PPC, haddana wali ma ahan heer ay maaraynta koontada si buuxda otomaatig u noqon karto iyada oo aan suuqgeeye gadaashiisa la dhigin. Si kastaba ha noqotee, soo noqnoqoshada mustaqbalka ee lagu dhisay dusha sare ee shabakadaha neerfaha oo leh karti waxbarasho oo qoto dheer ayaa halkaas gaari doonta. Sida AI loo bari karo inuu ciyaaro ciyaar ka fiican kan aadanaha, sidoo kale sidoo kale wuxuu awood u yeelan doonaa inuu keligiis socod ku sameeyo olole PPC ah.
Sirdoonka Farsamada iyo Xayeysiinta Dhaladka
AI waxay saameyn weyn ku yeelaneysaa xayeysiinta asalka ah horeyba. Dhinaca tiknoolajiyada xayeysiiska, adeegsiga barashada mashiinka wuxuu abuurayaa kharash ku baxa moodellada kaqeyb qaadashada (CPE), oo lid ku ah dhaqanka caadiga ah ee CPC, CPM ama CPA. Tani waxay ku habboon tahay suuqleyda doonaya inay u qaybiyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin maaddada sare. Suuqgeeyayaasha mawduucyada waxay rabaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Marka laga eego aragtida falanqaynta, dhammaan faa'iidooyinka isku mid ah ee AI ay bixiso ee loogu talagalay xayaysiinta bandhigga ayaa la ogaaday, sidoo kale - ogaanshaha goobaha ugu wax ku oolka badan ee keenista taraafikada waxqabadka leh illaa saddex digrii. Xogtaani waxay u oggolaaneysaa miisaaniyadda in loo wareejiyo oo keliya bogagga wax qabta waxayna u oggolaaneysaa sumcadaha inay miisaaniyadda kala soo baxaan goobahaas aan sameynin. Heerkan muuqaalku wuxuu ka caawinayaa suuqleyda inay iska ilaaliyaan ku dhowaad dhammaan qashinka, khayaanada iyo xadgudubka la xiriira warbaahinta lacag-bixinta ee internetka.
Waxay sidoo kale siisaa aragti tartan aad u sax ah. Tani waxay waxtar u leedahay sababo kale oo aan caddayn. Aruurinta liistada hantida hal-abuurka tartame ee xayeysiinta udhaxeysa qeybihii sida wanaagsan wax u qabtay waxay gacan ka geysan kartaa in magacyadooda la siiyo tartan dhinaca hal-abuurka ah. Intaa waxa u dheer, sirta ku duugan falanqaynta AI-wadaha ahi waxay u oggolaanaysaa suuq-yaqaanku inuu ogaado nooca ay u badan tahay inuu sida ugu fiican u qaban doono marka la isticmaalayo xalalka xayeysiinta ee waddaniga ah si loo qiyaaso qaybinta.
Sirdoonka Artifishalka ah iyo Waxyaabaha La Isboonsariyay
Qalabka sirdoonka ee ku saleysan AI sidoo kale waxay ku habboon yihiin daah-furidda isku-darka lacagta la bixiyo iyo fursadaha mawduucyada la kafaala qaaday. Sida laga soo xigtay Margaret Boland ee Business Insider, shanta sano ee soo socota waxyaabaha la kafaala qaaday ayaa noqon doona qaabka ugu dhaqsaha badan ee soo koraya. Waxyaabaha la kafaala qaaday waxaa loo tixgeliyaa xayeysiis foomka dheer ah. Waa maqaal dhan ama taxane maqaalo ah oo ay qortay ama daabacaadda ama magaca laftiisa.
Xogta sirta ah waxay ka caawin kartaa suuqleyda inay sameyaan liistada ugu habboon ee daabacaadda iyo / ama baloogyada si ay u codsadaan waxyaabaha la kafaala qaaday ama isweydaarsiga lacag bixinta ah. Waxay sidoo kale bixisaa hab ku habboon oo lagula socdo waxqabadkeeda waqti ka dib iyada oo aan loo baahnayn ku tiirsanaanta daabacaadda si loo bixiyo xog.
Sirdoonka Artifishalka ah iyo Baraha Bulshada ee Lacagta lagu bixiyo
Waqti ka dib, muuqaalka warbaahinta bulshada ee dabiiciga ah ee noocyada ayaa si aad ah u yaraaday. Tani waxay ku qasabtay dad badan inay maal gashadaan xalka badan ee quudinta laga bixiyo kanaallada bulshada. Dhab ahaan, 60% wadarta qarashka xayeysiinta barnaamijyada caalamiga ah on xayeysiinta hooyo noqon doonaa on Facebook by 2020.
Ganacsatada warbaahinta bulshada ee lacag la bixiyo waxay garwaaqsadaan faa iidooyin la mid ah sida lagu sharaxay qeybta kore ee barnaamijka xayeysiinta. Si kastaba ha noqotee, faa'iidada ugu weyn ee ay ku siiso suuq-geynta warbaahinta bulshada ee la bixiyo waa madax-bannaanida xogta. Suuqleydu uma baahna inay si gaar ah ugu tiirsanaadaan boodhadhka Twitter-ka ama Facebook si ay ula socdaan waxqabadka. Jaangooynta xogta iyo jaan goynta dhammaan kanaallada warbaahinta bulshada ayaa ah faa'iido, sidoo kale.
Sidoo kale, aragtida saddexda darajo, suuqleydu waxay awood u yeelan doonaan inay aqoonsadaan halka adeegsaduhu ahaa kahor booqashada shabakadda warbaahinta bulshada. Macluumaadkani wuxuu noqon karaa mid aad u qiimo badan oo lagu aqoonsado meelo cusub oo lagu xayeysiiyo ama lagu dhajiyo fikrad sheeko.
Qeybta ugu hooseysa ee sida AI u saameyneyso warbaahinta lacagta la siiyaa waa mid fudud - waxqabad fiican iyo qiimo jaban. Qashinka, khayaanada iyo xadgudubka ayaa si fiican loo aqoonsaday, waxaanna aragti fiican ka haysannaa geeska warshadeena ee internetka. Nagala soo qaybgal markale usbuuca soo socda maaddaama oo aan si qoto dheer ugu dhex milmayno dhammaan muuqaalka tikniyoolajiyadda xayeysiinta. Wixii intaa ka badan oo ku saabsan sida AI u saameyneyso warbaahinta la kasbaday iyo milkiyadeeda, iyo qeyba-hoosaadyadooda, xor ayaad u tahay inaad soo dejiso ebookkeygii ugu dambeeyay.
Falanqaynta Suuqgeynta & Sirdoonka Artificial
Tags: aisirdoonka macmalSirdoonka Cilmiga ah iyo FalanqayntaSirdoonka Farsamada iyo Xayeysiinta DhaladkaSirdoonka Artifishalka ah iyo Baraha Bulshada ee Lacagta lagu bixiyoSirdoonka Cilmiga ah iyo Bixi Halkii GujiSirdoonka Artifishalka ah iyo Waxyaabaha La Isboonsariyayxayeysiis hooyobixisay baraha bulshadaBixi halkii gujiiibsashada xayeysiiska barnaamijkawaxyaabaha ay kafaala qaadayso
Widget-ka 'WordPress Sidebar Widget' iyo 'Shortcode' ee loogu talagalay Ciyaaraha Podcasts